မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု အခြေအနေများ « MMWeather Information BLOG
« မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း မိုးရွာသွန်းမှု ပိုလာနိုင် ငလျင်တစ်ခု၏ အင်အား ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ? »
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု အခြေအနေများ
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်း – အာရေဗျပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်း မုန်တိုင်း KUENA(20S) မှ အပ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ပစိဖိတ် အနောက်မြောက်ပိုင်း အရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တို့တွင် မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မှု မရှိပါ။
20S KUENA – 07 Jun 2012 0000Z
Location: -9.5 56.2
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့တွင် တိမ်တိုက်စုဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေ (အပေါ်/အောက်)
ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ ကပ္ပလီပင်လယ်, တိမ်ထုစုဖွဲ့မှု အခြေအနေ, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် « မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း မိုးရွာသွန်းမှု ပိုလာနိုင် ငလျင်တစ်ခု၏ အင်အား ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ? »
« မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေမရှိသော်လည်း မိုးရွာသွန်းမှု ပိုလာနိုင် ငလျင်တစ်ခု၏ အင်အား ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ? »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum